တစ်ချိန်က ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ချစ်အစ်ကိုလူပျိုကြီး ကျော်ရှိန်းအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးပြောလာတဲ့ ပပဝင်းခင် - Swelsone news
တစ်ချိန်က ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ချစ်အစ်ကိုလူပျိုကြီး ကျော်ရှိန်းအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးပြောလာတဲ့ ပပဝင်းခင်
အနုပညာလောကရဲ့ ထူးထူးခြားခြား မောင်နှမနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပပဝင်းခင်နဲ့ ကျော်ရှိန်းတို့ကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပပဝင်းခင်နဲ့ ကျော်ရှိန်းတို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးက အသက်အရွယ်တွေကိုယ်စီရရှိလာချိန်မှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို အရင်ကလောက်မလုပ်ကိုင်တော့ပဲ လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီးတွေအဖြစ်ပဲ အပူအပင်ကင်းကင်းနေထိုင်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဇန်နဝါရီလ (၃၁) ရက်နေ့ကတော့ ကျော်ရှိန်းရဲ့ မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပြီး ပပဝင်းခင်ကလည်း သူမရဲ့ အစ်ကို ကျော်ရှိန်းအတွက် အခုလိုပဲ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလာခဲ့ပါတယ်။
“Happy Birthday Ko Gyi ! Happy Birthday returns of the day.Best wishes for many more ! 🎉🎊ချစ်ကိုကြီး၏မွေးနေ့မှစ ချစ်သောမိသားစုနှင့်အတူ အသက်ရာကျော် ကျန်းမာခြင်း ချမ်းသာခြင်း ပျော်ရွင်ခြင်း အောင်မြင်ခြင်း ပြည်စုံခြင်း ဘေးရန်အပေါင်းကင်းဝေးပြီး လိုတိုင်းရ တတိုင်းပြည့်စုံသော ဘဝကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ရပါစေ… သာသနာအကျိုးကို ဆထက်တိုးပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ ချစ်သောမိသားစုမှ ဆုတောင်းပေးပါတယ်😘🎂🌸🌺🎊🎁🎉🎈🥰 လူပျိုကြီး ကိုကြီးကျော်ရှိန်း အသဲကျော်တွေအတွက် ပုံတွေ အများကြီးတင်ပေးလိုက်တယ်နော် 😍😍😍”ဆိုပြီး ကျော်ရှိန်းကို လွမ်းနေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း ဓာတ်ပုံလေးတွေ မျှဝေပေးလာပါတယ်။
ကျော်ရှိန်းနဲ့ ပပဝင်းခင်တို့ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို မလုပ်ကိုင်ဖြစ်တော့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ အားပေးနေရဆဲ အနုပညာမောင်နှမနှစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ကျော်ရှိန်းအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးတွေ ပြောခဲ့ကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ယနေ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ဂေဟာမှာ သိန်း(၂၀)ဖိုးနီးပါး ကလေးတွေအတွက် သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်
သူမလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အာဟာရသုခဆွမ်းစားကျောင်းဆောင်ကြီးကို ပြန်လည်ပြုပြင်လှူဒါန်းတော့မယ့် ထက်ထက်မိုးဦး
လိုင်းပေါ်မှာ စာလေးတွေရေးပြီးပေါက်ကွဲပြတဲ့ လုပ်ရပ်ကိုရွေးချယ်မှ မှန်ကန်တယ် ထင်ရင်လည်း ထမင်းရှင်တွေရဲ့ အမုန်းကိုခံရမှာပဲ ဆိုတဲ့ ခြူးလေး
ယနေ့အချိန်ထိမည်သည့်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှ မထုတ်ပြန်သော “မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး”အဖွဲ့အစည်း၏အစည်းအရုံးဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ကြောင်းပြောလာတဲ့ တိုင်ရွန်
“အာဏာရှင်အလိုမရှိ” ဟူသောစာသားနှင့်အတူ ဓာတ်ပုံရိုက်တင်ခဲ့သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့၀င်နှစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၌ ကားတစ်စီးအရှိန်လွန်တိမ်းမှောက်၍ တက္ကသိုလ်ဆရာမ(၃)ဦးကွယ်လွန်